I-Lovely Lake Cottage aka The Yellow House
Ngaba ujonge indawo epholileyo, epholileyo ngelixa undwendwela usapho / izihlobo emachibini, indawo yokuphumla kunye nokubamba iindibano zosapho okanye uhlale ngelixa uzimase umtshato / umcimbi wosapho? Indlu etyheli yeyakho!
Ifakwe kweyona ndawo intle yeLake Wawasee, iNdlu emthubi inezinto ezininzi zokonwabela ukuhlala kwakho-indlela yokuhamba/yebhayisekile, kufutshane nedolophu, isikrini esiphambi kweveranda, iveranda engasemva, iqula lomlilo, igriza yangaphandle kunye nembono yendlu. amanzi. Ukhenketho lwesikhephe sabucala kunye nokurenta, ukufikelela kwipier kunye nokuhanjiswa kwegrosari xa uceliwe.
Ukongeza kumagumbi okulala ama-4 kwigumbi eliphezulu, le Ndlu iYellow inendawo yokuhlala enkulu, indawo yokutyela ephangaleleyo, ikhitshi elikhulu, iiveranda evaliweyo yangaphambili, iveranda yangaphandle kunye neyadi ebanzi engasemva ukwenza imisebenzi yosapho yonwabise ngelixa benikana indawo.
Ifumaneka kwi-Eli Lilly Road, iNdlu emthubi ikwi-'Rodeo Drive' yaseLake Wawasee.